बुद्ध नै तोडफोड ः यो त अति भो
बुद्ध अर्थात शान्ति, उज्यालो ज्योति । त्यो ज्योति निभाउने, शान्ति खलबल्याउने प्रयत्न हुन थालेको दृष्टान्त हो, बुद्धका मूर्तिको तोडफोड । आतंककारीहरुले अफगानिस्तानको बामियान बुद्धको मूर्ति तोडफोड गर्दा विश्व हल्लियो र पुननिर्माण गरेर बुद्धको सम्मान गर्न थालिएको छ । हामी त बुद्धबासी, बुद्धको मूर्ति तोडफोड हेरिरहन मिल्छ ? तोडफोड आफैमा निन्दनीय कार्य हो । त्यसमाथि राष्ट्रको गौरव, पहिचान र विश्वशान्तिको ज्योतिपुञ्ज बुद्धको मूर्ति नै तोडफोड, यो त अति भो ।
सरकार र सुरक्षा छ भने बुद्धको मूर्ति तोडफोड गर्नेको हो, उसलाई पक्राउ गरेर जनताका सामु चिनाउन जरुरी छ । यतिबिघ्न अराष्ट्रिय कर्म गर्ने जो कोही होस्, जुनसुकै दलका सदस्य हुन्, उसलाई कारवाही हुनैपर्छ, जनताले त्यस्ता नराधमलाई चिन्न पाउनुपर्छ । बुद्ध देशको पहिचान हो भन्ने नबिर्सौं ।
सिद्धान्त राजमार्गमा राखिएका ५ थान बुद्धका मूर्ति यसरी फुटाइएका छन् । नेपाल भ्रमण वर्ष, लुम्बिनी भ्रमण वर्ष, २० लाख पर्यटक भित्र्याउने र बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनीको व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार गर्नुपर्ने बेलामा बुद्धकै मूर्तिको यसरी तोडफोड हुनुले हाम्रा शिर झुकेको छ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाकाको सिक्सलेन राजमार्गको शंकरचोकदेखि नयाँ मिलसम्म राखिएका २२ मध्येका ५ बुद्धका मूर्तिहरु शान्तिविरोधीहरुले यसरी भत्काएका छन् ।
नगरका मेयर र प्रहरी कसले किन फुटायो भन्ने पत्ता नलागेको बताउँछन् । सार्वजनिक सडकमा राष्ट्रबिरोधी काम गर्नेको पत्ता लगाउन सक्दैन भने त्यस्तो जिल्ला प्रहरी, जिल्ला प्रशासन, नगरपालिकाको के काम ? योभन्दा असक्षमता र अकर्मण्यता अरु के हुनसक्छ ? यस्ता कार्यलाई राष्ट्रिय अपराध मानिनुपर्छ ।
जसरी हत्या बलात्कारका घटना बढेका छन्, अव तोडफोडको घटना पनि बढ्ने संकेत देखिन्छ । राष्ट्रिय पहिचानको जगेर्ना गरेर बुद्ध र बुद्धको निर्वाणाको सन्देशलाई विश्वव्यापी गराएर रहलपहल बुद्ध नेपालमा जन्मेका होइनन् भन्ने दुर्भावनाको अन्त्य गर्नुपर्ने समयमा बुद्धको मूर्ति तोडफोड गर्नु ठूलै साजिस हो । यो तोडफोडले कसलाई लाभ हुनसक्छ ? यो दृष्टिबाट अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।
सिद्धार्थ गौतम ५६३ अथवा ४८० बीसीइमा लुम्बिनीमा जन्मेर ४८३ अथवा ४०० वीसीइमा कुशीनगरमा मृत्यु भएको मानिन्छ । यही समयमा उनलाई निर्वाणा प्राप्त भएको थियो र त्यसपछि बुद्धधर्मको व्यापक प्रचार हुनथालेको हो ।
वर्तमान कालखण्डमा विश्वमा यतिबिघ्न तनाव बढेर गएको छ कि कुनै पनि बेला अर्को विश्वयुद्ध हुनसक्ने खतराका कालाबादलहरु देखिन्छन् । यस्तो समयमा बुद्धको शान्तिको सन्देशले मृतसञ्जिवनी बुटीको काम गरिरहेको छ । नेपाली सेनासमेत विश्वशान्तिका लागि खटिएको अवस्था छ । नेपाल स्वयम् शान्तिका लागि अथक प्रयत्न गर्दैछ । यी तमाम सत्यमा पर्दा हाल्नका लागि बुद्धका मूर्तिहरु तोडफोड गरेर नेपालमा अशान्ति छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको पनि हुनसक्छ । बुद्धले भनेझैं मूर्ति फुटाउनेले बुझ्नुपर्छ– काम विषय उसको बिनाशको कारण पनि बन्नसक्छ । तिमी अरुलाई हानी हुने काम नगर्नु । बुद्धवाणी छ– समाजमा असामाजिकता रहिरहने हो भने समाज सधैं असंगठित र टुक्रिएर रहन्छन् ।